किन आउँदैन नवजात शिशुको आँसु ?
न्यूजलय बुधबार ०९, पुष २०७६
नवजात शिशु जन्मिने बित्तिकै चर्को आवाजमा रुने गर्छन् । उक्त आवाज स्वास्थ्य राम्रो भएको संकेत हो । तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने नवजात शिशुको रुवाई ठूलो शिशुको भन्दा फरक हुने गर्छ । नवजात शिशुको आँखबाट आँसु निस्किने गर्दैन ।
नवजात शिशुको आँखालाई जोगाउन र तिनीहरूलाई ओसिलो....
बाख्राले जन्मायो यस्तो अनौठो पाठा
अर्जेन्टिनामा एक बाख्राले अनौठो पाठा जन्माएको छ । पाठा देखेर सबै जना छक्क परेका छन् ।
ग्लेडिस ओवीडियो नाम गरेकी महिलाको फार्ममा एक बाख्राले यस्तो अनौठौ बच्चा जन्माएको हो । उनले बताए अनुसार त्यो पाठाको शरीर स्वस्थ थियो । तर आँखा र टाउको भने अलि....
उदयपुरमा फौजी किराको प्रकोप, धान उत्पादनमा कमी
न्यूजलय मङ्गलबार ०८, पुष २०७६
उदयपुर । उदयपुरमा अमेरीकन फौजी किराको प्रकोपले गर्दा धान उत्पादनमा कमी आएको छ ।
पाक्न लागेको धानबाली किराले खाएर नष्ट गरेपछि उत्पादनमा निक्कै कमी आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब १२ हजार ७ सय ११ हेक्टरमा धान लगाइए पनि ३ सय ५०....
प्रचण्ड पत्नी सीताको हातमा दुई लाखको मोबाइल, तात्यो सामाजिक सञ्जाल
न्यूजलय सोमबार ०७, पुष २०७६
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता पौडेल आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचारका लागि भारतमा रहेकी छन् ।
गत शुक्रबार प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले आमा सीताको उपचारका लागि भारतस्थित बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठमा रेहेको तस्विर फेसबुकमा शेयर गरेकी हुन् ।
न्यूजिल्यान्ड पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यस्ता कुरा
काठमाडौँ । न्यूजिल्यान्ड जानका लागि भिसा प्राप्त भइसकेपछि त्यहाँ दुई हप्ताका लागि आवास बुकिङ गर्नुपर्छ । जहाँ रहँदा दुई हप्ताको लागि आफन्तको भर पर्नेभन्दा पनि आफैले आवास बुकिङ गर्दा राम्रो हुन्छ ।
न्यूजिल्यान्ड अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले एउटा ल्यापटप लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ ।
म्याराडोनाले भनेः १३ वर्षको उमेरमा वृद्धासँग यौनसम्पर्क गरेँ
काठमाडौ । अर्जेन्टिनाका विश्वकप विजेता डिएगो म्याराडोनाले आफुलाई एलियनले अपहरण गरेको बताएका छन् ।
म्याराडोनालाई टिवाइसी स्पोर्ट्सका पत्रकारले के तपाइँ एलियनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा म्याराडोनाले भनेका थिए, ‘एकपटक म मदिराले धेरै मात्तिएको थिए। म घरबाटै ३ दिन वेपत्ता भएको थिए। त्यसबेला मलाई....
वास्तु शास्त्रमा शुभ र अशुभ कुराहरुको संकेतबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ । जीवनमा घट्न विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घटनाले तपाइँलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । धन प्राप्तिका लागि यस्ता संकेत....
थाहा पाउनुहोस जाडोमा अमला खानुका फाइदा
अमलामा भरपूर मात्रामा भिटामिस ‘सी’, आइरन र क्याल्सियम पाइन्छ। जाडो मौसममा सक्खरसँग अमला खाँदा शरीरले ऊर्जा प्राप्त गर्छ। जाडोमा अमला खानुका फाईदा यस्ता छन्ः
१. अमलामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ‘सी’ पाइने हुँदा यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। चिसोमा हुने रुघाखोकीलगायत समस्याबाट राहत दिलाउँछ।
यस्ता छन् मयुरको प्वाँख घरमा राख्दा हुने फाइदा
मयुरको प्वाँखले छुट्टै महत्वपूर्ण प्रतिकात्मकताको भूमिका खेल्दछ। मयुरले सौन्दर्य, सन्तुलन, जागरण, अमरत्व, आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास, जागरूकता, नेतृत्व, आत्मप्रेम, र पुनरुत्थानको प्रतिकको काम गर्छ । साथै यसलाई पूर्वीय दर्शनमा धैर्यता, उदारता र दयाभावको प्रतिक गर्दछ। भगवान कृष्णको मुकुटमा सुशोभित मयूरको प्वाँखले जीवनका सबै नकारात्मक ऊर्जा र अन्य....
जति पढ्दा पनि पटक्कै याद हुँदैन ? यसो गर्नुहोस्
धेरैले भन्ने गर्छन् पढ्न त कसलाई मन हुँदैन र तर जति पढे पनि याद नै हुँदैन । यदि पढेको याद हुँदैन भने वास्तुशास्त्र अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् । वास्तु शास्त्रले विभिन्न दिशावाट प्राप्त हुने ऊर्जाका आधारमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोग कसरी गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने जानकारी....